Gollaha Amniga Q.M oo War ka soo saaray [Tuka-raq]
Saturday June 09, 2018 - 08:18:46 in Wararka by Super Admin
New York- Golaha amniga Qaramada Midoobay ayaa qoraal ka soo saaray xaalada tuka-raq oo ah xiisad coladeed oo u dhexaysa Somaliland & Puntland warkaasi ayaa lagu sheegay in labada dhinac looga baahan-yahay inay xabad joojin dhaqan geliyaan
Golluhu wuxuu ka digay hadalada xanafta leh ee labada dhinac warbaahinta isu marinayaa inay soo urinayso colaada taasi oo meesha ka saaraysa baa lagu sheeay in xabad-joojintii Beesha caalamku ku dhawaaqday ay hir-gasho,sidoo kale colaada ayuu ku tilmaameen inay sababtay barakac dad badan oo aan haysan Gargaar deg deg ah.
Puntland & Somaliland ayaa loogu baaqay inay ciidamadooda gabi ahaanba ka soo baxaan jiidaha dagaalka isla markaana fadhiisimoohoodii hore ku laabtaan si looga maarmo dhiig Somaliyeed oo qubta.
Dhawaaqa Beesha Caalamka ayaa ku soo beegmaya xili Somaliland & PL ay laduba Gurmad ciidamo ah geeyeen Jiidaha dagaalka isla markaana aanay muuqan Saansaan lagu daminayo dagaalka.
Colaada ayaa curtay markii Somaliland la wareegtay Tuka-raq oo horay fadhiisin ugu ahyad Puntland waxana laba jeer dagaal qadhaadhi dhexmaray labada Ciidan.
Gunaanadkii Baaqaasi waxa lagu sheegay in Madax-banaanida & Minidma Somaliya ay tahay lama taabtaan muqadas ah isla markaana ay uga digayaan cid kasta oo kala qo-qobaysa Somaliya inay dib uga laabtaan, taasi oo dhabar-jab ku ah Somaliland oo doonaysa inay Madax-banaani hesho.
Somaliland & PL ayaa ku mursan G,Sool Sa tan & nadkii 2002 Gacan ku haynta Gobolka Sool oo ay Puntland Dastuurkeeda ku qoran in Gobolka Sool uu ka mid yahay Gobolada ay Maamusho halka Somaliland ay ku doodayso in Gobolkaasi ay raaciyeen dhux-xadeedkii Gumaystihu dalka kaga tegay.